Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सार्वजनिक स्थानमा सुर्तिजन्य पदार्थ खरिद-विक्रि नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण – Emountain TV
सार्वजनिक स्थानमा सुर्तिजन्य पदार्थ खरिद-विक्रि नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण
काठमाडौं, २० मंसिर । मानव स्वास्थ्यलाई असर पार्ने सुर्तिजन्य पदार्थ सार्वजनिक रुपमा खरिद विक्रि गर्न पाइँदैन । यस्ता पदार्थहरु सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्न पनि पाइँदैन । सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन २०६८ ले यस्ता कार्यलाई दण्डनिय मानेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यो नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन २०६८ मा सुर्तिजन्य पदार्थ भन्नाले धुम्रपान वा सुर्ती सेवनको निमित्त बनाइएका वा उत्पादन गरिएका चुरोट, विँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुतीर्, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थलाई सुर्तीजन्य पदार्थ भनी परिभाषीत गरेको छ ।
यस्ता पदार्थ सार्वजनिक रुपमा खरिद विक्रिलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । कानुनमा कारबाहीको ब्यबस्था गरिएपनि कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न नसकिएको कानुन व्यवसायीहरुको धारण छ ।
कानुनमा सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक यातायात लगायतका स्थानमा विक्रि र सेवनमा प्रतिबन्ध गरेको भएपनी यस्ता पदार्थ खुलेआम सार्वजनिक स्थानमा विक्री पनि गरिएका छन् र सेवन पनि गरिएका छन् ।
सडकका पेटीमा खुलेआम विक्रीका लागि राखिएका यी सुर्तिजन्य पदार्थमा नियमकारी निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन । कानुन बनाउने तर यसको कार्यान्वयनमा चाँसो नदिने प्रवृतिले यस्ता मानव स्वास्थमा असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थहरु निर्वाद रुपमा खरिदविक्री र सेवन भइरहेका छन् । तर सरकारी निकाय भने विभिन्न कारण देखाउँदै यसको नियन्त्रणमा असफल बनीरहेको छ ।
ऐन आएको करिब ८ वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ । खुलेआम ऐन विपरीतका कार्य हुँदा समेत अहिलेसम्म कारबाहिको दायरामा कोहि आउँदैनन् । सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्ने मात्र होइन सेवन गरेर फालिएका चुरोटका ठुटा र सुर्तीजन्य पदार्थका खोलले सडक पेटी भरीएका छन् । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने यस्ता पदार्थमा सम्बन्धीत निकाय संवेदनशिल बन्न सकेको छैन।
धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका पसलबाट मात्र विक्रिवितरण गर्न पाइन्छ । तर अनुमती नलिई बाटाे, चोक, चौराहा, सार्वजनिक स्थानमा राखिएका पसल, कारबाहिको परेका छैनन् । नियमनकारी निकायले नै कसैको रोजी रोटी किन खोस्ने भन्दै खुलेआम राखिएका यस्ता पसललाई कारबाहि नगर्दा यसको नियन्त्रण